Homebuyer Support - Washington Homeownership Resource Center
घरधनी सहायता कोष
त्यसैले तपाइँ एक घर किन्न चाहानुहुन्छ! WHRC तपाइँलाई यो रोमाञ्चक, जटिल, र कहिले काहिँ भारी प्रक्रिया नेविगेट गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
तपाइँको घर सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो खरिद हुनेछ जुन तपाइँले कहिल्यै गर्नुहुनेछ र एक स्मार्ट उपभोक्ता हुनुको मतलब हजारौं डलर हुन सक्छ - शायद हजारौं डलर - बचत मा।
WHRC को लागी एक कल तपाइँ पूर्व खरीद आवास परामर्श, homebuyer शिक्षा कक्षाहरु, तल भुक्तानी सहायता कार्यक्रमहरु, र वैकल्पिक homeownership मोडेलहरु जस्तै सामुदायिक भूमि ट्रस्टहरु र स्वयं सहायता homeownership (मानवता को लागी बास सोच्नुहोस्) संग जोड्नेछ। WHRC जानकारी र संसाधनहरु तपाइँको स्थान, आय, र विशिष्ट आवश्यकताहरु को अनुरूप प्रदान गर्दछ।
हामी यहाँ छौं तपाइँ ज्ञान र उपकरणहरु संग तपाइँको सशक्तिकरण को लागी तपाइँको homeownership सपनाहरु लाई हासिल गर्न को लागी सशक्त गर्न को लागी।
बारम्बार सोधिने Homebuyer प्रश्नहरु
Homebuyer शिक्षा के हो र मलाई यो किन चाहिन्छ?
एक homebuyer शिक्षा वर्ग एक अनलाइन वा व्यक्तिगत वर्ग तपाईं राम्रो खोज्न, किन्न, र एक घर को प्रक्रिया लाई बुझ्न को लागी लिन सक्नुहुन्छ। Homebuyer शिक्षा तपाइँको धितो nderणदाता वा तपाइँ downpayment वा अन्य क्रेता सहायता प्रदान गर्ने कार्यक्रम द्वारा एक आवश्यकता हुन सक्छ। यदि तपाइँ homebuyer शिक्षा पूरा गर्न को लागी आवश्यक छैन भने, एक वर्ग लिने homebuying प्रक्रिया स्पष्ट हुनेछ र तपाइँलाई कुनै प्रश्न सोध्न को लागी एक अवसर दिनेछ।
सबैभन्दा व्यापक रूप मा उपलब्ध कक्षाहरु वाशिंगटन राज्य आवास वित्त आयोग द्वारा प्रायोजित र राज्य भर पुस्तकालयहरु मा उपलब्ध साथै अनलाइन छन्। पाँच घण्टा सम्म चल्ने, आयोग को कक्षा realtors, गैर मुनाफा, र साझेदारी मा काम उधारकर्ताहरु द्वारा सिकाइएको छ तपाइँ एक पूर्ण, तटस्थ पाठ्यक्रम ल्याउन। यदि तपाइँ एक विशिष्ट गैर-लाभकारी एजेन्सी संग एक घर किन्न को लागी काम गरीरहनुभएको छ, त्यो एजेन्सी आयोग को वर्ग को आवश्यकता हुन सक्छ, यसलाई बदल्नुहोस्, वा यसको आफ्नै कक्षा वा कक्षा को श्रृंखला संग पूरक। कक्षा मा भाग लिए पछि, तपाइँ पूरा गर्ने प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुहुनेछ। क्लिक गर्नुहोस् यहाँ तपाइँको क्षेत्रमा एक homebuyer शिक्षा कक्षा पाउन वा WHRC हटलाइन कल गर्नुहोस्।
Homebuyer शिक्षा र पूर्व खरीद परामर्श को बीच के फरक छ?
Homebuyer शिक्षा र पूर्व खरीद परामर्श एक समान उद्देश्य को सेवा, तर तिनीहरू एउटै सेवा होइनन्। जबकि homebuyer कक्षाहरु एक समूह सेटिंग मा सामान्य जानकारी प्रदान गर्दछ, पूर्व खरीद परामर्श एक एक मा एक तपाइँको विशिष्ट स्थिति को अनुरूप मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ। Homebuyers सामान्यतया यस सेवा को लागी एक शुल्क तिर्छन्, यद्यपि केहि homebuyer सहायता कार्यक्रमहरु पूर्व खरीद परामर्श नि: शुल्क को लागी आफ्नो कार्यक्रम मा भाग लिन को लागी आवश्यकताहरु को भाग को रूप मा प्रदान गर्दछ। एक पूर्व खरीद परामर्श सत्र मा, सल्लाहकार तान्ने र तपाइँको क्रेडिट समीक्षा र तपाइँको घर को बजेट को जाँच, loanण उत्पादनहरु को विभिन्न प्रकार मा जानकारी को प्रस्ताव, र सम्भावित बाधाहरु लाई सम्बोधन गर्न को लागी कदम पछ्याउन को सिफारिश र तपाइँ तपाइँको लक्ष्य तिर अघि बढ्न सिफारिश गर्दछ।
म कसरी धितो nderणदाता छनौट गर्न सक्छु?
एक धितो nderणदाता छनौट एक महत्वपूर्ण निर्णय हो, र चुनिंदा जाँदैछ तपाइँ तपाइँको loanण को जीवन मा डलर को हजारौं बचाउन सक्नुहुन्छ। किनकि उधारकर्ताहरु लाई उनीहरु को प्रस्ताव को दर संग लचीलापन छ, तपाइँ तपाइँको ब्याज को प्रस्ताव गरीएको पहिलो दर लिन चाहनुहुन्न। एक कम दर, तथापि, मात्र एक considerationणदाता छनौट गर्दा विचार छैन, र हामी तपाइँलाई सल्लाह को लागी निम्न बिन्दुहरु लिन प्रोत्साहित गर्दछौं:
के धितो nderणदाता वाशिंगटन मा downpayment कार्यक्रमहरु को बारे मा जानकार छ र के उनीहरु लाई ग्राहकहरु लाई घर को खरीद को लागी तल भुक्तानी सहायता को उपयोग मा मदद गर्ने अनुभव छ?
के तपाइँ उनीहरु संग कुरा गर्न र प्रश्न सोध्न सहज महसुस गर्नुहुन्छ? घर किन्ने, विशेष गरी पहिलो पटक homebuyer को रूप मा, एक भारी प्रक्रिया हुन सक्छ र यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँको nderणदाता तपाइँको प्रश्नहरुको जवाफ दिन सक्छ।
Theणदाता पारंपरिक, VA, FHA, र USDA includingण सहित loanण प्रकार को एक किसिम को उत्पत्ति गर्न सक्षम छ?
म कसरी एक घर जग्गा एजेन्ट छनौट गर्ने?
सही अचल सम्पत्ति एजेन्ट खोज्दै तपाइँको नयाँ घर को लागी खोज मा एक महत्वपूर्ण कदम हो। पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, तपाइँको अचल सम्पत्ति एजेन्ट homebuying प्रक्रिया को समयमा तपाइँ को प्रतिनिधित्व गर्दछ। उनीहरु लाई स्थानीय आवास बजार को एक गहिरो समझ, वार्ता को लागी एक बलियो क्षमता, र समुदाय जसमा तपाइँ एक घर किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ संग एक राम्रो परिचित हुनु पर्छ। यदि तपाइँ आफ्नो घर किन्न को लागी एक homebuyer सहायता कार्यक्रम को उपयोग गरीरहनु भएको छ, एक रियल एस्टेट एजेन्ट कि यी कार्यक्रमहरु संग परिचित छ एक भन्दा जो कोहि छैन भन्दा प्रभावकारी हुन सक्छ। WHRC विशिष्ट अचल सम्पत्ति एजेन्टहरु को लागी सिफारिशहरु गर्दैन, तर तपाइँको homebuyer कार्यक्रम (यदि तपाइँ एक प्रयोग गरीरहनुभएको छ) तपाइँलाई सिफारिश गर्न को लागी केहि हुन सक्छ।
तपाइँ सही निर्णय गर्न मा मद्दत गर्न को लागी यी प्रश्न सोध्न विचार गर्नुहोस्:
के तपाइँ एक पूर्ण-समय पेशेवर अचल सम्पत्ति एजेन्ट हुनुहुन्छ?
कति समय सम्म तपाइँ क्रेताहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ?
के तपाइँ एक टीम छ कि तपाइँको ग्राहकहरु लाई समर्थन गर्दछ? यदि त्यसो हो भने, कसले मलाई मेरो खरीद को लागी सम्पर्क गरीरहेछ र कुन प्रकारको टर्नअराउन्ड समय को आशा गर्न सक्छु जब म एक जांच गर्छु?
तपाइँ कसरी घर खोज को माध्यम बाट बन्द प्रक्रिया को काम देख्नुहुन्छ?
तपाइँ कसरी निर्धारण गर्नुहुन्छ कि कुन घरहरु मलाई देखाउन को लागी?
तपाइँ कसरी निर्धारण गर्नुहुन्छ यदि एक घर सही मूल्य हो?
तपाइँ के पेशेवर पदनाम छ?
के तपाइँ पहिलो पटक homebuyers संग काम गर्नुभयो?
के तपाइँ homebuyer सहायता कार्यक्रम म मेरो घर किन्न को लागी प्रयोग गरीरहेको संग परिचित हुनुहुन्छ?
घर किन्नको लागी मलाई कुन क्रेडिट स्कोर चाहिन्छ?
उत्कृष्ट (ण (FICO मा माथिल्लो 720 मा) तपाइँ सबैभन्दा कम दर र सबैभन्दा अनुकूल loanण कार्यक्रमहरु को लागी पहुँच दिनुहुनेछ, तर राम्रो वा निष्पक्ष withण संग ती अझै पनी विकल्प छन् जब एक .ण को लागी योग्य। न्यूनतम क्रेडिट स्कोर प्रत्येक loanण प्रकार को लागी भिन्न हुन्छ। परम्परागत loansण सामान्यतया 20२० वा उच्च को एक क्रेडिट स्कोर को आवश्यकता छ र FHA loansण सामान्यतया ५80० वा उच्च को एक क्रेडिट स्कोर को आवश्यकता छ।
तपाइँ तपाइँको क्रेडिट स्कोर को लागी एक बर्ष मा एक पटक नि: शुल्क जाँच गर्न सक्नुहुन्छ annualcreditreport.com। तपाइँको बैंक वा क्रेडिट यूनियनले तपाइँलाई तपाइँको FICO स्कोर को लागी नि: शुल्क पहुँच प्रदान गर्न सक्छ। एक आवास सल्लाहकार मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ तपाइँ आकलन गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँको क्रेडिट स्कोर बढाउन वा तपाइँको घर किन्न विकल्पहरु लाई सुधार गर्दछ। यदि तपाइँ तपाइँको क्रेडिट स्कोर बढाउन आवश्यक छ, क्रेडिट परामर्श मद्दत गर्न सक्छ। WHRC लाई कल गर्नुहोस् यी संसाधनहरु संग जोडिएको छ।
मेरो आय को कति मँ मेरो मासिक बंधक भुक्तानी मा खर्च गर्नुपर्छ?
Ndणदाता र पैसा व्यवस्थापन विशेषज्ञहरु तपाइँको मासिक घर भुक्तानी (कर, बीमा र कुनै घर मालिक एसोसिएशन देय सहित) २1१TP1T वा तपाइँको सकल मासिक आय को कम मा राख्न को लागी सिफारिश गर्दछ। विशेषज्ञहरु तपाइँको कुल debtण भुक्तानी - तपाइँको धितो, क्रेडिट कार्ड, सवारी साधन, स्कूल loansण र कुनै अन्य debtण सहित - ३1१TP1T वा मासिक आय को कम राख्न को लागी सिफारिश गर्दछ। उदाहरण को लागी, यदि तपाइँ प्रति महिना $5,000 बनाउनुहुन्छ, $1800 वा कम को कुल paymentण भुक्तानी आदर्श हो। केहि ndणदाताहरु यो भन्दा माथि जान सक्छन्, परिस्थितिहरु को आधारमा, तर 43% मा एक debtण-देखि-आय अनुपात (DTI) एक loanण को लागी अप्रत्याशित बनाउँछ।
एक आवास सल्लाहकार तपाइँ तपाइँको घरेलु बजेट समीक्षा गर्न को लागी तपाइँ तपाइँको homeownership लक्ष्यहरु लाई समायोजित गर्न debtण कम गर्न सक्नुहुन्छ सुझाव सहित मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ।
मँ तल भुक्तानी को लागी कति बचत गर्नु पर्छ?
एक "तल भुक्तानी" रकम हो कि तपाइँ घर खरीद मा योगदान गर्नुहुन्छ, या त तपाइँको आफ्नै पैसा बाट, एक तल भुक्तानी सहायता कार्यक्रम, वा दुबै बाट। धेरै पहिलो पटक homebuyers उनीहरु लाई 20% को एक न्यूनतम तल भुक्तानी को विश्वास छ। धेरै मानिसहरु को लागी, यो रकम बचत एक विशाल रोडब्लॉक हुन सक्छ र कहिले काहिँ एक मात्र कारण उनीहरुलाई लाग्छ कि उनीहरु एक homeowner हुन को लागी तयार छैनन्।
20% तल राख्नु एक घर किन्न को लागी एक आवश्यकता छैन। औसत मा, homebuyers 6% तल राखे र केहि loanण प्रकारहरु लाई कम पनि आवश्यक छ। उदाहरण को लागी, FHA loansण मात्र 3.5% तल आवश्यक छ, र USDA loansण र VA loansण बिल्कुल एक तल भुक्तानी को आवश्यकता छैन। एक उच्च तल भुक्तानी तपाइँको मासिक भुक्तानी र तपाइँको समग्र loanण लागत कम हुनेछ।
अन्ततः, तपाइँ एक तल भुक्तानी तिर राखीएको रकम तपाइँको मासिक आय, तपाइँको वर्तमान बचत, आवास बजार मा, र तपाइँको समग्र लक्ष्य मा निर्भर गर्दछ। एक आवास सल्लाहकारले तपाइँलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ कि कुन आकार तल भुक्तानी तपाइँको बजेट को लागी काम गर्दछ।
घर मर्मत सम्भार वा आपतकालिन को लागी मैले कती बचत गर्नु पर्छ?
उद्योग विशेषज्ञहरु को सिफारिश छ कि तपाइँ रखरखाव र मरम्मत को लागी घर को मूल्य को 1-3% अलग सेट। यो रकम निर्धारण गर्न को लागी अर्को तरीका यो छ कि तपाइँको योजना बनाई मर्मत र बर्ष को लागी मर्मत को एक सूची बनाउन को लागी, ती परियोजनाहरु को अनुमानित लागत को गणना, तब १२ द्वारा विभाजित। तल भुक्तानी सहायता को एक लाभ यो हो कि तपाइँ केहि संरक्षण गर्न को लागी अनुमति दिन सक्नुहुन्छ। एक मर्मत र मर्मत कोष को लागी तपाइँको पैसा।
कति आपतकालिन को लागी अलग गर्न को लागी अन्ततः तपाइँ द्वारा निर्धारित गरीन्छ। धेरै विशेषज्ञहरु बस्ने खर्च को 3-6 महिना अलग सेटि को सिफारिश। धेरै पैसा तपाइँ बचत गर्नुहुन्छ, राम्रो संग सुसज्जित तपाइँ एक आपतकाल को ह्यान्डल गर्न को लागी हुनेछ, तर दिमागमा राख्नुहोस् कि तपाइँ छुट्याउन चाहानुहुन्छ एक रकम छ कि तपाइँको बजेट को लागी यथार्थवादी छ। एक आवास सल्लाहकारले तपाइँलाई एक घरको बजेट बनाउन को लागी मद्दत गर्न सक्छ जुन आपतकालिन, मरम्मत, वा अन्य बचत लक्ष्यहरु को लागी बचत समावेश गर्दछ।